Xildhibaanada Wakiilada ee Kasoo Baxay Xisbiyada mucaaridka oo Kiyuu ugu Jira 24-kii Saacadood ee u dambeeyey Madaxtooyada iyo kulamo gooni-gooni ah oo Madaxweyne Muuse Biixi ku qaabilay...
Tuesday June 08, 2021 - 22:30:19 in Wararka by Super Admin
Hargeysa(Xogreebnews)- Warar lagu kalsoon yahay oo laga helayo qasriga Madaxtooyada Somaliland, ayaa sheegaya in 24-kii saacadood ee u dambeeyey ahayd mashquul, Kadib markii ay si weyn ugu qulqulayaan Xildhibaanada golaha Wakiilada Jamhuuriyadda Somaliland ee cusub, kuwasoo ah intooda badani kuwii kasoo baxay Xisbiyada mucaaridka.
Warar u dhuun-daloola dhaqdhaqaaqyaas oo ay heshay Shabakada Xogreebnews, ayaa lagu sheegay in Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Md Muuse Biixi Cabdi si hoose raxan-raxan ugu qaabilayo Xildhibaanada kasoo baxay Xisbiyada Mucaaridka. Wararku waxay sheegayaan in Madaxweynaha mudanayaasha cusub ka Wadahadlayaan doorashada Shir-gudoonka Baarlamaanka cusub.
Wararku waxay intaa ku Dareen in kulamada Madaxweynaha iyo Xildhibaanadu intooda badan kusoo dhamaaday is afgaraad.
Dhaqdhaqaaqa Madaxweynaha iyo xod-xodashada Xildhibaanada cusub, ayaa kusoo beegmaya xili Xisbiyada mucaaridku isku bahaysanayaan xulufo cusub oo ay doonayaan inay ku qabsadaan Shir-gudoonka golaha Wakiilada Somaliland.
Waxanay Xukuumada u wadataa Gudoomiyaha Golaha Wakiilada cusub Wasiirkii hore ee arrimaha dibada Somaliland Professor Yaasin Faratoon, halka Xisbiyada mucaaridku u wataan Siyaasi Cabdirisaq Khaliif oo hore u ahaa Wasiirkii hawlaha guud ee Xukuumadii Axmed Siilaanyo.